Codsiga Deeqda -waxbarasho ee MTN | Su'aalo iyo Jawaabo hore oo lacag la'aan ah Soo dejiso 2022
Codsiga deeqda waxbarasho ee MTN | Su'aalo & Jawaabo hore oo Bilaash ah Download
Ma rabtaa inaad dalbato deeqda waxbarasho ee MTN si bilaash ah ama aad u soo dejiso deeqda waxbarasho ee 'MTN Foundation' ee la xaqiijiyay su'aalaha iyo jawaabihii hore? Tilmaamahan ayaa kugu socon doona sida loo gaaro mid ka mid ah.
Codsiga deeqda waxbarasho ee MTN wuxuu hadda socdaa codsiyada waxaa lagu bilaabi karaa oo lagu dhammaystiri karaa khadka tooska ah iyadoo la raacayo hagahan halkan.
1 Waa maxay deeqda waxbarasho ee MTN?
2 Deeqda MTN ma runbaa?
3 Ayaa Dalban Kara Deeqda MTN?
4 Shuruudaha U-qalmitaanka Deeqaha MTN Foundation
5 Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee MTN?
6 Sideen U Dalban Karaa Deeqaha MTN?
6.1 Sida loo Codsado MTN Sayniska & Teknolojiyada deeqda waxbarasho
6.2 Sida loo Codsado Deeqda waxbarasho ee MTN ee Ardayda Indhoolayaasha ah
7 Soo Degso Deeqaha MTN Su'aalaha iyo Jawaabaha hore
7.1 Sideen ku helaa deeqda waxbarasho ee MTN Su'aalo iyo Jawaabo hore?
7.2 Tusaalooyin Deeqda waxbarasho ee MTN Su'aalaha hore
Waa maxay deeqda waxbarasho ee MTN?
MTN Scholarship waa barnaamij sanadle ah oo deeq waxbarasho ah oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda taas oo dooneysa inay ku abaalmariso ardayda heerka sare ka gaadhay dalal ay ka mid yihiin Nigeria iyo dalal kale oo Afrikaan ah.
Waxaa jira laba qaybood oo deeq waxbarasho ah oo ku milmay deeqda waxbarasho ee MTN kuwaas oo kala ah;
Qorshaha Deeqda Sayniska iyo Teknolojiyada MTN (MTN STSS)
Qorshaha deeqda waxbarasho ee MTN ee Ardayda Indhoolayaasha ah (MTN SSBS)
MTN STSS waxaa heli kara oo kaliya ardayda sayniska iyo teknolojiyadda halka MTN SSBS ay heli karaan dhammaan ardayda indhoolayaasha ah ee shahaadada koowaad haysta iyadoo aan loo eegin goobahooda waxbarasho.
Deeqda MTN ma runbaa?
Deeqda waxbarasho ee MTN maaha khiyaano, waa dhab. Sikastaba, waxaa laga yaabaa inay jiraan dad been abuur ah oo halkaa jooga oo sheeganaya inay yihiin saraakiisha deeqda waxbarasho ee MTN, waa inaad aad uga taxaddartaa oo aad iska ilaalisaa dadka noocaas ah.
HA SIinin LACAG LACAG AH SI AY KUU CAAWIYO IN AAD KA HELISO SCHOLARSHIP MTN - Deeqda waxbarasho ee MTN waxay ku saleysan tahay mudnaan mana damaanad qaadi karto cid ka baxsan saraakiisha mas'uulka ka ah hannaanka xulashada ee ku doorta abaalmarinta iyadoo lagu saleynayo mudnaanta.
Ayaa Dalban Kara Deeqda MTN?
Ardayda heerka 300 ah ee baranaya koorsooyinka la xiriira Sayniska & Teknolojiyada iyo ardayda indhoolayaasha ah ee wax ka barta Machadyada Jaamicadaha Dadweynaha (Jaamacadaha, Polytechnics iyo Kulliyadaha Waxbarashada) ee ku baahsan Nigeria ayaa xaq u leh inay codsadaan barnaamijka deeqda waxbarasho ee MTN Foundation.
CGPA-da ugu yar ee MTN Sayniska iyo cilmiga tikniyoolajiyaddu waa 3.5 oo ah nidaamka darajo bixinta 5.0 ama waxay u dhigantaa (Second class sare) iyo ugu yaraan CGPA ee deeqda waxbarasho ee MTN ee ardayda indhoolayaasha ah waa 3.0 nidaamka qiimeynta 5.0.
Codsadayaasha ka socda cilmiga farsamada waa inay lahaadaan GPA-da Sare waqtiga la codsanayo.
Shuruudaha U-qalmitaanka Deeqaha MTN Foundation
Codsadeyaashu waa inay noqdaan arday reer Nigeria ah
Waa inuu ku jiraa Heerka 300 sida waqtiga codsiga
Waa inuu wax ku dhigtaa jaamacad dawladeed, farsamo ama kulleejada waxbarashada ee Nigeria (Ardayda jaamacadaha gaarka loo leeyahay xaq uma laha)
Waa inuu baranayaa koorso sayniska iyo tikniyoolajiyadda laxiriira ama uu yahay arday indhoole ah
Waa inuu buuxiyaa CGPA ugu yar ee loo baahan yahay ee arjiga
Immisa ayey mudan tahay deeqda waxbarasho ee MTN?
Deeqda waxbarasho ee MTN waxay u dhigantaa laba boqol oo kun oo naira sanadkiiba labada qaybood.
Codsadeyaasha guuleysta ee ka soo baxa imtixaanka aqoonta MTN waxaa la siiyaa deeq waxbarasho oo u dhiganta N200,000.00 sanadkiiba illaa qalin-jabinta illaa iyo inta ay ilaalinayaan darajooyinka loo baahan yahay.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ka caawinnay ardayda inay miisaamaan imtixaanka aqoonta MTN Foundation ee ku saabsan imtixaankeena casriga ah ee MTN su'aalaha hore iyo jawaabaha PDF. Sannadkan, marka laga hadlayo si loo caawiyo xitaa arday badan oo ku guuleysta deeqda waxbarasho ee MTN, waxaan hoos u dhignay qiimaha ebookgan si aan uga dhigno kuwo ay awoodi karaan kuwo badan.
AMAAL: Mar alla markii aad iibsato deeqda waxbarasho ee MTN su'aalahii hore iyo jawaabaheena, waxaad xaq u leedahay laba sano oo kale oo dambe oo ah MTN deeqda waxbarasho ee hore su'aalaha iyo jawaabaha aad awoodi doontid inaad si buuxda ugu soo dejiso bilaash!
RIIX Halkan Hada si aad uhesho # 1000 kahor intaan dalabku dhicin -Dhawaan dhacaya
Halkan Guji si aad iigu soo dirtid farriinta Whatsapp si aad ugu iibsato # 1500
Sideen U Dalban Karaa Deeqaha MTN?
Si aad u dalbato barnaamijka deeqda waxbarasho ee MTN, waa inaad bixisaa macluumaadka soo socda;
Macluumaadka Shaqsiga ee Saxda ah
Macluumaadka UTME Sax ah
Faahfaahinta hay'addaada (Jaamacadda, farsamada ama kulliyadda waxbarashada)
Faahfaahinta Dugsigaaga Sare
Xiga Faahfaahinta Kin
Dhammaan faahfaahintaan waxaa loo baahan doonaa si loogu dhammaystiro Codsiga Deeqda-waxbarasho ee MTN si guul leh.
Sida loo Codsado MTN Sayniska & Teknolojiyada deeqda waxbarasho
Si aad u dalbato deeqda waxbarasho ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda MTN, hubi inaad hayso faahfaahinta aan kor ku soo sheegay oo diyaar kuu ah maxaa yeelay ma awoodi doontid inaad keydiso arjiga deeq-lacageedka kalabar si aad dib ugu bilowdo.
Ka dib markaad hesho macluumaadkan diyaar;
Booqo bogga aasaaska MTN https://foundation.mtnonline.com/
Guji deeqaha waxbarasho
Hoos udhaabo oo dhagsii Foomka Qorshaha Sayniska & Teknolojiyada MTN
Buuxi macluumaadka sida loogu baahan yahay oo soo gudbi.
Si howshu u fududaato, waad sameyn kartaa GUJI HALKAN SI AAD U DUGATO BOGGA CODSIGA DUGSIYADA MTN STSS.
Sida loo Codsado Deeqda waxbarasho ee MTN ee Ardayda Indhoolayaasha ah
Marka laga reebo bixinta darajooyinka WAEC, deeqda waxbarasho ee ardayda MTN indhoolayaasha ah waxay u baahan tahay macluumaad kasta oo kale sida deeqda waxbarasho ee STSS.
Haddii aad diyaarisay macluumaadka lagama maarmaanka ah, raac tallaabooyinka hoose si aad u dalbato;
Hoos u guji oo guji Foomka Deeqda waxbarasho ee loogu talagalay Ardayda Indhoolayaasha ah
Si howshu u fududaato, waad sameyn kartaa GUJI HALKAN SI AAD U DUGATO BOGGA CODSIGA DUGSIYADA MTN.
Soo Degso Deeqaha MTN Su'aalaha iyo Jawaabaha hore
Mid ka mid ah sirta ku guuleysiga deeqaha waxbarasho ayaa ah qabashada su'aalahii hore iyo jawaabihii kahor imtixaanka deeqda waxbarasho.
Kadib codsi guuleysi ah oo ku saabsan deeqda waxbarasho ee MTN, hay'adda deeqda waxbarasho ayaa dooran doonta tiro codsadeyaal aqoon u leh inay u fariistaan ​​imtixaanka aqoonta MTN.
Ardayda la xushay waxaa lagu wargelinayaa imtixaanka deeqda waxbarasho oo aan ka badnayn laba maalmood ka hor maalinta imtixaanka oo haddii aadan si habboon u diyaarin imtixaankan ka hor waqtigan, waxaa laga yaabaa inaad khatar gelisay fursaddaada sugitaanka deeqda waxbarasho ee MTN runtiina xaq uma lihid deeqda waxbarasho sanadka soo socda.
Tani waa sababta aan kugula talineyno mar alla markii aad si guul leh u codsatay deeqda waxbarasho, waxa xiga ee ay tahay inaad isla markaaba sameyso ayaa ah inaad hesho deeqda waxbarasho ee hore iyo jawaabaha si ay kaaga caawiso inaad si habboon ugu diyaar garowdo imtixaanka.
Waxay ku jirtaa imtixaankan aqoonta ah in isreebreebka ugu dambeeya ee abaalmarinta deeqda waxbarasho ee MTN la xushay.
Sideen ku helaa deeqda waxbarasho ee MTN Su'aalo iyo Jawaabo hore?
Si aad u hesho deeqda waxbarasho ee MTN su'aalahii hore iyo jawaabihii waa inaad si toos ah ugala soo degtaa boggayaga wax soo saar qiimo jaban oo ah # 1000 ama nagala hadal Whatsapp si aad ugu iibsato qiimaha caadiga ah ee # 1500.
Tusaalooyin Deeqda waxbarasho ee MTN Su'aalaha hore
Su'aalaha deeqda waxbarasho ee MTN waxaa laga soo qaatay meelaha soo socda:
Arrimaha hadda jira
Hoos waxaa ku yaal qaar ka mid ah tijaabooyinka su'aalaha deeqda waxbarasho ee MTN;
Buuggayaga buugga lagu iibiyo ee guriga ku yaal wuxuu ku soo bandhigayaa buugaag kala duwan
maadooyin ballaadhan iyo luqado badan, oo milicsanaya
dhadhanka _____ ee xubnaha qoyskeena.
B. xaddidan tahay
Bacaha balaastigga ah waa ____ astaan ​​u ah bulshada macaamiisha ah; iyagu
waxaa laga helaa meeshaad waligaa safarto.
B. gogol dhaaf
C. meel walba jooga
E. qarsoodi ah
Dr. Stuart wuxuu u baahan yahay inuu ____ dooddiisa wax badan la socdo
xogta tijaabada ah; sida ay hadda tahay qoraalkiisu waa ___
A. taageero - qoto dheer
B. xoojin - la aqbali karo
C. turxaan - qancisa
D. badhida - kuma filna
Waa kuwan qaar ka mid ah fursadaha kale ee deeqaha waxbarasho ee laga yaabo inay adiguba xiiseeyaan;
Deeqda waxbarasho ee Dawlada Federaalka ee Nigeria ee lagu Barto Dibadda
Shahaadooyinka Jaamacadeed ee lagu barto Kanada
Sida loo Codsado Deeqda Agbami ee Ardayda Nigerian
Top 15 NGO Deeqaha waxbarasho ee Nigeria
Deeqaha Deegaanka Deeqaha Nigerian Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
Sida loo dalbado deeqda waxbarasho ee MTNCodsiga deeqda waxbarasho ee MTN
Previous Post:Xirfadaha Xisaabaadka: Faa'iidooyinka 10 iyo Rajooyinka Xirfadda
Pingback: Iskuulada PA Ugu Fudud Ee Lagu Helo - Daraasada Quruumaha Dibadda
Pingback: Sida Loogu Galiyo PA-Khidmadaha, Shuruudaha, Dugsiyada
Jared wuxuu leeyahay,
October 14, 2021 at 2: 59 pm
Waa yaab! Tani waa mid waxtar leh. Hadda waan soo dejinayaa